Manampy Amin’ny Fanoratana ny Tantaran’ireo Mpampanofa Vatana Ao Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Manampy Amin'ny Fanoratana ny Tantaran'ireo Mpampanofa Vatana Ao Ogandà
Voadika ny 05 Jona 2017 13:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Français, Español, Italiano, English
Mpampanofa vatana ao Bwaise. Sary: Prudence Nyamishana
Raha manontany ahy ianao momba ny antony anoratako ato amin'ny bilaogiko ny diarin'ny vehivavy iray mpampanofa vatana, dia mety hovaliako hoe resaka fitia te-hahalala fotsiny no nanaovako izany. Nandre tantara aho hoe ao Bwaise, tanàna iray tsizarizary ao avaratr'i Kampalà, misy mampanofa ny vatany amin'ny vola zara raha 500 Uganda shillings (US$0.14) monja ireo vehivavy. Tiako ho ny sofiko mihitsy no handre ny tantara, ary angamba hizara izany ho an'ireo mpamaky ny bilaogiko. Noho izany dia nantsoiko ny namako, Joseph, mpiasa sosialy izay niasa an-taona maro tao amin'io faritra io.
Dimy minitra miala ny Distrika Ivon'ny Fandraharahàna ao Kampalà no misy ilay tanàna tsizarizary ao Bwaise. Efa niandry ahy i Joseph raha iny izaho nidina avy ao anaty taksibe iny indrindra, indray tokakandro izay. Rehefa avy nifananihany teo, nentiny niditra lalankely iray teritery izay aho. Ery amin'ny faran'ilay lalankely, miova tampoka ny tontolo: Tsy ilay Kampalà nahazatra hitako hatrizay. Toeram-pisotroana voaefitrefitra rindrin-tany ary feno lehilahy sy vehivavy amin'ny andro mitataovovonana no hitako. Feno fako eny rehetra eny ary misy mozika Lingala mandeha any ambadimbadika any. Mba ho afaka mitety, nila nandingana lalandrano maloto maromaro izahay sy Joseph. Nanohy ny làlanay namakivaky lalankely voatemitra trano bongo vita tamin'ny hazo sy fanitso izahay. Taoriana kely dia hitako ireo tranondopy, ary maherin'ny 300 ireo vehivavy mandeha isanandro ao amin'ity faritra ity hampanofa ny tenany, na andro na alina.
Ramatoa iray, any amin'ny faha-efapolo taonany any, no niarahaba anay teo am-pahatongavana. Nolazainy anay ny anarany ary tamim-pireharehana no nanolorany ny tenany ho toy ny “Mama” ho an'ireo mpampanofa vatana. Nasainy izahay hiditra tao aminà efitrano kely iray eo ho eo amin'ny valo metatra toradroa, ary tany fotsiny amin'izao no gorodona. Ery amin'ny kihony iray misy talantalana feno tavoahanginà taoka vokarina ao an-toerana ihany. Feno fandriana mifanaingina, na fandriana tokana ery amin'ny ilany ao anatin'ilay efitrano. Zazakely iray matory teo amin'ny fandriana ambany teo no nanaitra ny masoko.
Nolazain'ilay Mama taminay fa ireo fandriana ireo dia ampanofainy an'ireo izay manofa na mampanofa vatana. 500 Uganda shillings isaky ny mampiasa no haban'ny fandriana iray.
Nambarako an'ilay Mama fa mahaliana anay ny hanao fanentanana momba ny fepetra mampihoronkoditra iainan'ireo mpampanofa vatana any amin'ireo tanàna tsizarizary ao Kampala, mba hahafahan'ireo mpandray fanapahankevitra mijery azy ireny, ary antenaina, mba hanao zavatra momba izany. Noho i Joseph efa niaraka niasa taminy tany aloha, ary isan'ny nisitraka ny iray tamin'ireo fandaharanasan-dry Joseph ny iray tamin'ireo zanany, nandray anay an-tanàn-droa izy. Saingy nolazainy anay fa tsy maintsy aloa vola ny fotoana lany iresahanay amin'ireo vehivavy.
Nanao fampidirana anay taminà tovovavy iray 28 taona ilay Mama, tovovavy iray miasa ao amin'ny toerana tantaniny. Misosa tsara ilay vehivavy rehefa miteny anglisy ary nangateheta ny hamboraka ny tantarany. Nomarihany tamiko fa tsy mila omena vola izy—olona hiresaka aminy no ilainy. Nampanantena azy aho fa tsy hamoaka velively ny momba azy, saingy izy no nisisika hoe tsy olana izany, satria tsy misy na inona na inona intsony azony antenaina. Nanohina ny foko ny tantarany.
Rehefa navoakako ny tantarany, niteraka fanehoankevitra marobe tao amin'ny media sosialy. Nisaotra ahy nilaza ilay tantara ny sasany tamin'ireo mpaneho hevitra, tamin'ny filazàna fa hahazo tombony avy amin'izany ireo vehivavy. Ny sasany, anefa, nanontany ny antony nanosika ahy hanoratra momba ilay olana.
Indray andro any! Indray andro any angamba! 🙃 Pru, misaotra anao nizara ireny tantaram-behivavy ireny.
“I have a plan” #SexWorkerDiaries https://t.co/NK9QaBcY3f via @nyapru1 <<This one made me tear>> 😞
“Manana drafitra aho” https://t.co/NK9QaBcY3f avy amin'i @nyapru1 <<Nampirotsaka ny ranomasoko ity iray ity>> 😞
Nisy sasany tamin'ireo mpamaky nanao fanolorantena, maro tamin'izy ireo no mbola mila fanatanterahana. Nisy olona iray nanome toky ahy hividy finday ho an'ireo vehivavy, ny sasany nandefa vola. Ny olona sasany aza nanoro hevitra ahy hanangana fikambanana afaka hanohana ivontoerana iray fanarenana sy afaka hamaly ny filàn'ireo mpampanofa vatana. Kanefa, notsindriako fa mpitantara fotsiny no anjara asako, ary amin'ny maha-mpamaky azy, izy ireo koa dia manana andraikitra hanao zavatra momba io olana io raha tena mampiasa loha azy ireo tokoa ilay izy.
Raha tany am-boalohany dia fitia te-hahafantatra fotsiny no nanosika ahy, ny fotoana laniko niresahana tamin'ireo vehivavy tao Bwaise dia nahafahako nahita olana lalimpàka izay tsy mbola novahàn'i Ogandà tanteraka. Ireo zavatra toy ny fanondrànana ankizy, ny fanandevozana ho amin'ny firaisana ara-nofo, ny tsy firaharahian'ny ray aman-dreny, ny fahantràna lalina, ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary ny heloka bevava. Arakaraky ny niresahako tamin'ireo vehivavy no nahatsapako bebe kokoa fa ireo olana atrehan-dry zareo dia tena goavana lavitra noho izay noeritreretiko. Ary tena manempotra ilay izy: tena efa saika nitsoa-pàhana aho taorian'ny nandrenesako ilay tantara faharoa.
Ny fanomezana hery azoko avy amin'ireo fikambanana miasa momba ireny olana ireny no nanosika ahy hanohy hanoratra. Not for Sale Uganda (Ogandà Tsy Amidy), fikambanana sosialy iray izay miara-misalahy mametraka fandraisana andraikitra sy tetikasa sosialy mba hampitsaharana ny fanondranana olona, niteny ity valinteny iray ity ho an'ny tantara nosoratako momba ilay vehivavy iray mpampanofa vatana antsoina hoe Kemirembe:
“Tsy maintsy miasa miaraka isika hanome fanantenana ireo tena marefo. Tena mahavaky fo ny tantaran'i Kemirembe. Ankehitriny ny Not For Sale dia efa misy ao Ogandà ary miasa betsaka mikendry ireo olona tratry ny toejavatra toy ny manjo an'i Kemirembe na ny mitovitovy amin'ny azy, hitondra firotsahana an-tsehatra amin'ny resaka sosialy sy izay hafa fandraisana andraikitra sosialy maharitra afaka hanolotra azy ireny asa hafa mendrika hatao fanolo.”
Mpamaky iray nizara ireo tantara tao amin'ny pejiny Facebook ka naharay imailaka avy amin'ny namany any Etazonia, nilaza hoe:
“Ho any Ogandà aho amin'ny Aogositra hoavy io. Mihevitra ny hanampy ireo vehivavy tafiditra amin'ny fampanofàna vatana aho,” hoy ny nosoratany. “Raha mahafantatra olona ianao na maniry hanampy ahy hitady olona na ministera maniry hanampy ny vehivavy, dia mba ilazao aho, azafady.”
Benjamin Musaasizi, mpiara-manorina ny Divine Hearts (Fo Masina), fikambanana Kristiana, naneho hevitra tao amin'ilay lahatsoratra tao amin'ny bilaogy.
“Izahay ato amin'ny Fikambanana Divine Hearts dia tena mankasitraka tokoa ireo ezaka vitanao tamin'ny nitondràna ny zavamisy tahaka ireny ho fantatr'izao tontolo izao ary vonona izahay ny hiaraka hiasa aminao mba hahitàna fomba hanampiana ireny rahavavintsika / anabavintsika ireny.”
Nihaona mivantana tamin'i Benjamin aho ary nampanantena izy, tamin'ny anaran'ny fikambanana misy azy, fa handoa ny sarampianarana ho an'ny roa amin'ireo zanaka mpampanofa vatana. Ny fanomezantoky tahaka io, raha tanteraka, dia afaka hitondra fiovàna goavana amin'ny fiainan'ireny ankizy ireny.